Football Khabar » प्रिमियर लिग : एभर्टनद्वारा लेस्टर सिटीको उसकै घरमा धुलाइ !
प्रिमियर लिग : एभर्टनद्वारा लेस्टर सिटीको उसकै घरमा धुलाइ !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीले अप्रत्यासित हार व्यहोरेको छ । गत राति आफ्नो घरेलु मैदानमा भएको लिगको १३औं साताको खेलमा एभर्टनले लेस्टरलाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–२ को नमिठो हार चखायो । कार्लेस एन्सेलोट्टीको नेतृत्वमा रहेको एटर्भनले पछिल्ला केही खेलयता लिगमा सुधारिएको नतिजा निकालिरहेको छ । लिग सुरु हुँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको उसले त्यसपछि ३ खेल लगातार हारेको थियो ।
उपाधि होडमा रहेको लेस्टरलाई हराउनेक्रममा एभर्टनका लागि खेलको २१औं मिनेटमा ब्राजिलियन स्टार रिचार्लिसनले बक्सभित्रबाट ३ जना डिफेन्डरलाई बिट गर्दै निकै सुन्दर गोल गरेका थिए । एभर्टन त्यही गोलको अग्रता बचाएर ७१औं मिनेटसम्म पुग्यो ।
खेलमा फर्किन संघर्षरत लेस्टर त्यत्तिबेला स्तब्ध बन्यो, जब खेलको ७२औं मिनेटमा एटर्भनले दोस्रो गोल हान्यो । यसपटक कर्नर किकबाट आएको बल लेस्टरले बक्समा क्लियर गर्न नसक्दा मासोन होलगेटले खेलाडीको भिडबाट बललाई जाली चुमाएका थिए । त्यसपछि बाँकी समयमा लेस्टर खेलमा फर्किन सकेन । र, खेल एभर्टनले ०–२ ले जित्यो ।
अब यो जितपछि एभर्टन १३ खेलबाट २३ अंक जोड्दै पाँचौं स्थानमा चढेको छ । पराजित लेस्टर समान खेलपछि २४ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २ पुष २०७७, बिहीबार ०९:१४